မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ ရုပ်သံနှင့် စာသား (ဒေါက်တာမြင့်ချို) ~ Nge Naing
မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ ရုပ်သံနှင့် စာသား (ဒေါက်တာမြင့်ချို)
Wednesday, December 14, 2011 Nge Naing 50 comments
မင်္ဂလာပါ။ အခုလို နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အခမ်းအနားမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေအကြောင်း ပြောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားနေသူတယောက်အနေနဲ့ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ MDG Focus အဖွဲ့ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၆၃ နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံကြီးက လူသားတိုင်း ရယူခံစားထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ပြဌာန်းပေးထားတဲ့ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းကြီးကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း (၄၈) နိုင်ငံ လက်မှတ်ရေးထိုး ထောက်ခံခဲ့ရာမှာ လွတ်လပ်ရေးရခါစ၊ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ကျင့်သုံးခါစ မြန်မာနိုင်ငံလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီကတည်းကစပြီး ဒီမိုကရေစီ အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တွေ၊ ပညာရေးအခွင့်အရေး၊ ကျန်းမာရေး အခွင့်အရေး စသည်ဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးတွေကို လေးစားလိုက်နာခဲ့တာရော နိုင်ငံတကာနဲ့လည်း တက်တက်ကြွကြွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကြောင့်ပါ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ဂုဏ်တင့်ခဲ့ရပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာလည်း အများလေးစားမှုကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဦးသန့်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ရာထူးကို (၂) ကြိမ်တောင်အရွေးခံရပြီး ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။
(၁၉၆၂ ) ခုနှစ် စစ်တပ်က ဒီမိုကရေစီအစိုးရကို ဖြုတ်ချပြီးအာဏာရှင်စနစ်ကို ထူးထောင်လိုက်ချိန်ကစပြီး မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူ့အခွင့်အရေး အချိုးဖေါက်ဆုံးနိုင်ငံ စာရင်းထဲ ရောက်ခဲ့ရပြီး နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး အဖက်ဖက်မှာ ချွတ်ခြုံကျခဲ့ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာလည်း ဘယ်သွားသွား အများရဲ့ အထင်သေးမှုကို ခံခဲ့ရတာ အခုထိပါပဲ။
ကျနော်က အာဏာရှင်စနစ်အောက် ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်နေတဲ့ ကရင်ပြည်နယ်မှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ရပြီး ဆရာဝန်ဖြစ်တော့လည်း ကရင်ပြည်နယ်မှာပဲ လူထုကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းကို လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကရင်ပြည်နယ်သားတွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်ခံရတာရော ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး အဆင့်အတန်း နှိမ့်ကျနေရတာတွေပါ မြင်တွေ့ခံစားခဲ့ရပါတယ်။
ဆရာဝန်ဘ၀မှာ လူငယ်တွေနဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေကို ကျန်းမာရေးအခွင့်အရေး၊ ပညာရေးအခွင့်အရေးအကြောင်း ပညာပေးလို့ လူမှုရေးအဖွဲ့တခုဖွဲ့ပြီး ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့လို့ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံခဲ့ရသလို ဘ၀တူ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေရဲ့ ထောင်ထဲက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက် ခံရ မှုတွေကို သိခဲ့ကြားခဲ့ရပါတယ်။
- သမိုင်းဝင် ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးမှာ ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ဖမ်းဝရမ်းအထုတ်ခံရလို့ နယ်စပ်ကို ထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီး ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တကြော တော်လှန်ရေးဆရာဝန်ဘ၀နဲ့ တာဝန်ထမ်းတော့လည်း ကရင်ဒေသ၊ မွန်ဒေသ၊ ကရင်နီဒေသနဲ့ ပအို့ဝ်ဒေသတွေက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးမှုတွေကို ကိုယ်တွေ့ကြုံရ ခံစားရပြန်ပါတယ်။
ရွာတွေ မီးရှို့ခံရတာ၊ စိုက်ခင်းတွေ ဖျက်ဆီးခံရတာ၊ ယောက်ျားတွေကို သူပုန်အားပေးဆိုပြီး နှိပ်စက်တာ၊ ပေါ်တာဆွဲပြီး ညှင်းဆဲတာ၊ အမျိုးသမီးတွေကို အဓမ္မပြုကျင့်တာ၊ သတ်ပစ်တာတွေကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ပေါ်တာတွေနဲ့ မိန်းကလေးတချို့ကို ကျနော်ကိုယ်တိုင် ဆေးကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။
အစိုးရရဲ့ ထိုးစစ်ကြောင့် တောထဲတောင်ထဲမှာ သူတို့တွေနဲ့အတူ ကျနော်ထွက်ပြေး ပုန်းအောင်နေရတုန်းမှာ စားစရာ ငတ်ပြတ်တာ၊ ငှက်ဖျားနဲ့ ၀မ်းရောဂါဖြစ်တာ၊ ဆေးဝါးမလုံလောက်လို့ ကလေးငယ်နဲ့ အဖိုးအဖွားတချို့ သေဆုံးခဲ့ရတာတွေ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၃) နှစ်ကာလမှာ ကျနော်က သြစကြေးလျားမှာ နေထိုင်ခွင့်ရလို့ ဒီဒုက္ခတွေက လွတ်မြောက်ခဲ့ပေမဲ့ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကို ကျနော် ရောက်သွားတိုင်း သူတို့တွေ ဒီဒုက္ခတွေကို ဆက်ခံနေကြရတုန်းပဲဆိုတာ တွေ့ရ ကြားရပါတယ်။
ရက်စက်ယုတ်မာတဲ့ အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေ စစ်အစိုးရက ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်တဲ့ အမည်ခံ အရပ်သားအစိုးရကို အာဏာလွှဲပေးလိုက်ပေမဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေက အခုထိ ဆက်ရှိနေတုန်းပါပဲ။ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု ဒေသတွေမှာ အင်မတန် အခြေအနေ ဆိုးပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (၃၀၀) ကျော်လောက် လွှတ်ပေးတာ တချို့တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးနေတာ၊ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု လုပ်နေတာတွေကို လုပ်ပေးပေမဲ့ တဘက်မှာ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ဆက်တိုက်ပိတ်ပင်ထားတာ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား (၁၆၀၀) လောက်ကို မလွှတ်ပေးသေးတာ၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ကို ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာ၊ အရပ်သားတွေကိုပါ ပစ်မှတ်ထားပြီး ပေါ်တာဆွဲတာ၊ လုယက်တာ၊ အဓမ္မ ပြုကျင့်တာ၊ သတ်ဖြတ်တာတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကျူးလွန်နေတုန်းပါပဲ။ ဒီလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေဟာ စစ်ရာဇ၀တ်မှု၊ လူသားပြစ်မှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မှု အပြစ်တောင် ရောက်နေပြီ။
ကရင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာ ပြည်သူတွေ သောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ချီပြီး ရွာတွေကို စွန့်ခွာပြီး တောထဲမှာ ပုန်းနေရတုန်း နယ်စပ်ကိုဖြတ်ပြီး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံထဲမှာ ခိုလှုံနေရတုန်းပါပဲ။
ဒီလို လူ့အဃွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေကို ရပ်စဲရမည့်အစား ဒါကို လစ်လျူရှုပြီး ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက သူတို့အစိုးရကို အသိအမှတ်ပြု အကူအညီပေးလာအောင်ပဲ အာရုံစိုက်ပြီး လုပ်နေတာကို တွေ့နေရပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ဟာလည်း ဦးသိန်းစိန် အစိုးရရဲ့ အပြုသဘော အပြောင်းအလဲ လုပ်ပေးမှုအပေါ် အကောင်းမြင်တဲ့ ပြည်တွင်းကရော၊ နိုင်ငံတကာကပါ သူတို့ကို ဖိအားတွေ ပေးလာတာကြောင့် နောက်ဆုံးမှာ ပါတီကို မှတ်ပုံပြန်တင်မယ်၊ လာ မဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မယ်၊ လူထုအကျိုးရှိတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ် ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်အပါအ၀င် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားနေကြသူတွေ အတော်များများက လက်ရှိအခြေအနေမျိုးမှာ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်မှာကို သဘောမတွ့ကြပေမဲ့ NLD ရဲ့ ဘေးကြပ်နံကြပ် အနေအထားနဲ့ အခက်အခဲတွေကို နားလည်ပြီးလက်ခံပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ၀န်းရံပြီး NLD က ဆက်ကြိုးပမ်းသွား မဲ့နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံးလွှတ်မြောက်ရေး၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေကို စစ်ဆင်နေတာကို ရပ်စဲပြီး ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနဲ့ (၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ပြင်ဆင်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို ထောက်ခံအားပေးသွားဖို့ လိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကို သံသယအကျိုး ခံစားခွင့်ပေးသင့်ပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဌတွေ၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့ရဲ့ ခြေလှမ်းတွေ၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့် အကဲခတ်နေကြဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အားလုံးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက်ထက် စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်ခဲ့ကြသလို နိုင်ငံတကာကို လှည့်ဖြားခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းတွေ ရှိသူတွေပါ။
ဦးသိန်းစိန်က အဲဒီသူတွေရဲ့ အထောက်အခံမရှိဘဲ ရှေ့ဆက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဆို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အရ အချိန်မရွေး အာဏာသိမ်းနိုင်ခွင့် အပ်နှင်းထားတာမို့ စစ်တပ်က လုပ်ချင်သလို လုပ်လို့ရနေပါတယ်။
ဒီအခြေအနေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေ ချက်ချင်း တိုးတက်လာဖို့လမ်း မမြင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ နားလည်ကြရမှာက လက်ရှိ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအနေနဲ့ သူ့ဖါသာသူ စိတ်ကောင်းဝင်သွားပြီး လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေကို ရပ်ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကလည်း တူညီတဲ့ သဘောထားတခု ချမှတ်မှု မရှိဘဲနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် အရေးမယူဘဲနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေ ရပ်ဖို့ လက်ရှိအစိုးရကို မလုပ်နိုင်ပါဘူး။
NLD ရဲ့ လက်ရှိ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သက်သက်နဲ့လည်း ဒီအခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေ ရပ်တန့်သွားအောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ဒီသုံးချက်စလုံးအပေါ် အခြေခံပြီး ကြိုးပမ်းကြရပါလိမ့်မယ်။
တချို့ကပြောကြပါတယ်။ တို့တွေ သြစကြေးလျားမှာ နေကြတာမို့ ဘာမှသိပ်ထွေထွေထူးထူး လုပ်နိုင်မယ်မထင်ဘူးတဲ့။ ကျနော် ဒါကို လက်မခံနိုင်ဘူး။
တကယ်တော့ ကျနော်တို့တွေ သြစကြေးလျားမှာ ရောက်နေကြပေမဲ့ မြန်မာပြည်ထဲက လူတွေလောက် မလုပ်နိုင် မကူနိုင်ပေမဲ့ ကျနော်တို့တွေ လုပ်နိုင်တာတချို့ ရှိနေပါသေးတယ်။
(၁) သြစကြေးလျား အစိုးရအနေနဲ့ ရှိပြီးသားဖိအားတွေ၊ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှု (sanction) တွေကို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ မလွှတ်မချင်း၊ လူမျိုးစုတွေကို စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ အပါအ၀င် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေ မရပ်မချင်း၊ အားလုံးဝါ၀င်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး မစမချင်း ဆက်ထိန်းထားဖို့ တောင်းဆိုနိုင်တယ်။
(၂) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ NLD နဲ့ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုတွေကို အပြည့်အ၀ ဘက်ပေါင်းစုံက ထောက်ခံကူညီပေးဘို့ သြစကြေးလျ အစိုးရကို တောင်းဆိုနိုင်တယ်။
(၃) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက လူထုနဲ့ နယ်စပ်ဒေသမှာ ရှိနေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု အားလုံးကို လူသားချင်းစာနာတဲ့ အကူအညီတွေ ပို့ပေးဘို့ သြစကြေးလျားအစိုးရကို တောင်းဆိုနိုင်တယ်။
(၄) သြစကြေးလျား လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုလည်း ဒီမိုကရေစီ လိုလားတဲ့ မြန်မာပြည်ထဲက လွှတ်တော်အမတ်တွေကို ပံ့ပိုးပေးဘို့ တောင်းဆိုနိုင်တယ်။
(၅) သြစကြေးလျားက လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ မြန်မာ့အလုပ်သမား သမဂ္ဂတွေ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဘုန်းကြီးတွေ ဦးစီးတဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေ၊ အခမဲ့ ဆေးကုပေးနေတဲ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေကို ကူညီပေးဘို့ တိုက်တွန်းနိုင်တယ်။
(၆) သြစကြေးလျားက သတင်းမီဒီယာ သမားတွေကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့သွားပြီး မြန်မာသတင်းသမားတွေနဲ့ တွဲပြီး လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စတွေအကြောင်း အမှန်တရားတွေကို ဖေါ်ထုတ်လုပ်ကိုင်ဖို့ တိုက်တွန်းနိုင်တယ်။
(၇) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျုးစုတွေကို ပံ့ပိုးထောက်ခံတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ လှုံ့ဆော်မှုတွေ၊ Campaign တွေကို လုပ်နိုင်တယ်။
(၈) သြစကြေးလျားမှာ လုပ်တဲ့ မြန်မာလူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဘို့ မြန်မာနဲ့ သြစကြေးလျား မိတ်ဆွေတွေကို စည်းရုံးနိုင်တယ်။
(၉) မြန်မာနိုင်ငံထဲက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ၊ HIV/AIDS ရောဂါသည်တွေ၊ နာတာရှည်ရောဂါသည်တွေ၊ ဆင်းရဲလို့ ကျောင်းမထားနိုင်တဲ့ ကျောင်းသားနဲ့ ကလေးငယ်တွေကိုလည်း ကိုယ့်ချွေးနှဲစာထဲက ငွေနဲ့ ကူညီ နိုင်သလို သြစတြေးလျ မိတ်ဆွေကိုလည်း ကူညီဖို့ တိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်။
အခုလို ဂရုတစိုက် အလေးပေး နားထောင်ပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆစ်ဒနီမှာ ကျင်းပတဲ့ ၆၃ ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အခမ်းအနားမှာ ဒေါက်တာမြင့်ချို ပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းပါ။
Posted in: ဗွီဒီယို,သတင်း,သမိုင်းဝင်နေ့များ
December 14, 2011 at 11:55 PM Reply
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေကို ထင်ဟပ်နေသော စကားများ says:
ခလရ-၅၉ ပဲခူးတပ်မှ ဗိုလ်ကြီးသိဒ္ဓိစိုး ၏ ရဲဘော် တပ်သားတဦး
"ယုံကြည်ချက်​ကြောင့်​ အကျဉ်း​ကျ​နေသူ​တွေကို ထပ်လွှတ်ပေး​မလား" ​လို့ ​မေး​တာကို ​ဦး​သိန်း​စိန် ဖြေပုံ
" `ယုံကြည်ချက်​ကြောင့်´​ ဆိုတဲ့​ဟာက​တော့​ ​ပြောရမှာ ခက်တယ်။
ကျ​နော်တို့က `ယုံကြည်ချက်´ ဆိုတာက​တော့​ လက်မခံဘူး​။
ဥပ​ဒေတခုခုကို ကျူးလွန်ထားတဲ့​ အတွက်​ကြောင့်​ ကျ​နော်တို့က ဒါ အ​ရေး​ယူထား​တာဖြစ်ပါတယ်။
သူလိုပဲ ပြစ်မှု ကျူးလွန်ထား​တဲ့​သူ​တွေလည်း​ အကျဉ်း​ထောင်ထဲမှာ အများကြီး​​ ​ရှိတယ်။"
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်
"ဒီမှာ ယူနီဖောင်းနဲ့၊ မင်းတို့ကို သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်လို့ ရတယ်ကွ"
စ.က.ခ (၂၀) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၅၈၂)
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်
December 18, 2011 at 8:48 PM Reply
"စစ်တပ် ဆိုတာ ပစ်ရင် မှန်အောင် ပစ်တယ်" (ဗွီဒီယို) ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး "ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းရဲ့ လူသတ်သြဝါဒ" ဗွီဒီယိုကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
December 18, 2011 at 8:52 PM Reply
"အစိတ်သားတောင် မချန်နဲ့၊ မင်းတို့ အကုန်လုံးကို ရှင်းပစ်" ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
December 18, 2011 at 8:54 PM Reply
"စစ်တပ်ကို လာစမ်းရင် အကုန်လုံး သေချင်းဆိုးနဲ့ သေသွားမယ်" ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး ပြန်လည် လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
" `ယုံကြည်ချက်​ကြောင့် အကျဉ်း​ကျ​နေသူ​တွေ´ မရှိပါဘူး" says:
December 18, 2011 at 8:58 PM Reply
" `ယုံကြည်ချက်​ကြောင့် အကျဉ်း​ကျ​နေသူ​တွေ´ မရှိပါဘူး" ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
"ယုံကြည်ချက်​ကြောင့်​ အကျဉ်း​ကျ​နေသူ​တွေ (နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ) ကို ထပ်လွှတ်ပေး​မလား" ​လို့ ​မေး​တာကို ​ဦး​သိန်း​စိန် ဖြေပုံ
" `ယုံကြည်ချက်​ကြောင့်´​ ဆိုတဲ့​ဟာက​တော့​ ​ပြောရမှာ ခက်တယ်။ ကျ​နော်တို့က `ယုံကြည်ချက်´ ဆိုတာက​တော့​ လက်မခံဘူး​။ ဥပ​ဒေတခုခုကို ကျူးလွန်ထားတဲ့​ အတွက်​ကြောင့်​ ကျ​နော်တို့က ဒါ အ​ရေး​ယူထား​တာဖြစ်ပါတယ်။ သူလိုပဲ ပြစ်မှု ကျူးလွန်ထား​တဲ့​သူ​တွေလည်း​ အကျဉ်း​ထောင်ထဲမှာ အများကြီး​​ ​ရှိတယ်။"
"ဒီမှာ ယူနီဖောင်းနဲ့၊ မင်းတို့ကို သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်လို့ ရတယ်ကွ" says:
December 18, 2011 at 8:59 PM Reply
"ဒီမှာ ယူနီဖောင်းနဲ့၊ မင်းတို့ကို သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်လို့ ရတယ်ကွ" ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ကော့သောင်းမြို့လယ်တွင် အရာရှိတစ်ဦးအပါဝင် စစ်သားတချို့ မှုးယစ်ရမ်းကားမှု ဖြစ်ပွား says:
December 19, 2011 at 12:18 AM Reply
မြန်မာစစ်တပ်က ကောင်တွေက စစ်ခွေး တွေလေ
စစ်ခွေး သေနာပတိချုပ် နေဝင်း နဲ့ စစ်ခွေး သေနာပတိချုပ် သန်းရွှေ တို့ရဲ့ လူသတ် စစ်ခွေးဝါဒနဲ့ မွေးထုတ်ပေးထားတဲ့ စစ်ခွေးတွေလေ
စစ်ခွေး ဘောင်းဘီချွတ် သိန်းစိန်က ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ကျင့်သုံးနေပါပြီ လို့ သာ လိမ်နေတာ
ချိတ်ထမိန်ဝတ် အရပ်သားအရေခြုံ သိန်းစိန်ခေတ်မှာလဲ စစ်ခွေးတွေက နအဖ စစ်ခွေးခေတ်တုန်းကလိုပဲ
အခုလဲ အရင်ကလိုပဲ စစ်ခွေးတွေက ပြည်သူတွေကို ဆက်လက် ရမ်းကားနေတုန်းပဲ
ဒီလို ဘာမှေ-ာက်ဆင့် မရှိတဲ့ စစ်ခွေးတွေက (( ဒီမှာ ယူနီဖောင်းနဲ့၊ မင်းတို့ကို သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်လို့ ရတယ်ကွ )) လို့ ပြည်သူတွေကို စော်ကားရဲနေတုန်းပဲ
ဒါကို ကြည့်ရင် လူယောင်ဆောင်ထားတဲ့ သိန်းစိန် စစ်ခွေးအစိုးရက စစ်ခွေးတွေရဲ့ ပြည်သူအပေါ် ဥပဒေမဲ့ အနိုင်ကျင့်မှုတွေကို အရင်ကလိုပဲ အရေးမယူတာ ထင်ရှားနေပြီပဲ
ဒီလိုပဲ စစ်ခွေးတွေက လူသတ်လက်နက် အားကိုးနဲ့ ပြည်သူတွေကို ဆက်ပြီး ရမ်းကားနေတာ စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီလား
စစ်ခွေးတွေက (( ဒီမှာ ယူနီဖောင်းနဲ့၊ မင်းတို့ကို သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်လို့ ရတယ်ကွ )) လို့ ပြောတာ မြန်မာပြည်မှာ လူ့အခွင့်အရေးတွေ တိုးတက်နေပါတယ် ဆိုတာလား
ဒါပေမယ်. ABSDF လောက်တော. မရက်စက်ပါဘူး
ABSDF ကအကြောင်းတွေရေးတဲ. ဘလော.ဂါ မငယ်နိုင်ကြီး အိပ်ပျော်နေပြီထင်ပါရဲ.
ABSDF ရက်စက်တဲ့အကြောင်းတွေ ပလူပျံနေပြီ ပိုစ်.လေးတစ်ခုလောက် တင်ပါအုံးလား
December 22, 2011 at 12:28 PM Reply
Nge Naing အိပ်မပျော်ပါဘူး။ ကျွန်မရေးတဲ့ ABSDF ဘ၀အတွေ့အကြုံဖတ်ချင်ရင် C-Box ဘေးနာမှာ ကပ်လျှက်ရှိနေတဲ့ Label အောက်က အပေါ်ဆုံးခေါင်းစဉ်မှာ ABSDF တောတွင်း ဘ၀ပုံရိပ်များဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပို့စ် ၂၆ ခုတောင် ရှိပါတယ်။ အချိန်ယူပြီး အားရပါးရ သွားဖတ်ပါ။ ဒါတွေဟာ ABSDF သမိုင်းမဟုတ်ဘူး ABSDF မှာ ကျွန်မရဲ့ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုတွေသာ ဖြစ်တယ်။ ဒီဘလော့ဂ်ဟာ သူများရေးတဲ့ ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေကို ပြန်ဖေါ်ပြတာကလွဲရင် ကျန်တာအားလုံး ကျွန်မရဲ့ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုတွေ ရေးထားတဲ့ ဘလော့ဂ်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှု မဟုတ်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ကျွန်မ မရေးဘူး။ ဒီလောက်ဆို ရှင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
အချင်းချင်းသတ် တဲ့ အောက်တန်းစား ABSDF says:
December 23, 2011 at 6:33 PM Reply
December 23, 2011 at 6:34 PM Reply
December 23, 2011 at 6:35 PM Reply
December 23, 2011 at 6:36 PM Reply
December 23, 2011 at 6:37 PM Reply
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်စစ်စစ် ထွန်းအောင်ကျော် (ဓါတ်ပုံ) says:
စစ်အစိုးရက လွှတ်ထားတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးလို့ မမှန်မကန် အစွပ်စွဲခံရပြီး လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်ခံရပြီး ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၂) ရက်နေ့မှာ ကချင်ပြည်နယ်၊ ပါဂျောင်မှာ ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရသူ
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်စစ်စစ် ထွန်းအောင်ကျော် (ဓါတ်ပုံ)
ကိုထွန်းအောင်ကျော် ( ကျောင်းသားတပ်မတော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ မန္တလေး)
ABSDF စစ်ကြောရေးမှာ နှိပ်စက်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့တဲ့ AB ရဲဘော် (၁၄) ဦး စာရင်း says:
December 28, 2011 at 12:13 PM Reply
၁၂-၂-၁၉၉၂ ရက်မှာ ကျောင်းသားတပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း) ကချင်ပြည်နယ်၊ ပါဂျောင်မှာ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရတဲ့ ကျောင်းသား (၁၅) ယောက်အပြင် ABSDF စစ်ကြောရေးစခန်းမှာ သံချောင်း၊ အောင်နိုင်၊ မျိုးဝင်း၊ လှဆိုင် (လှဆောင်) အပါအဝင် AB စစ်ကြောရေးအဖွဲ့ဝင်များရဲ့ လူမဆန်သည့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲဘော် (၁၄) ယောက် ရှိပါသေးတယ်။
မတရား ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲဘော် (၈၀) ကျော်ထဲက စုစုပေါင်း (၂၉) ယောက် အသက်ဆုံးခဲ့ရတာပါ။
ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲဘော် (၁၄) ယောက်ကတော့ -
အချိန်မတန်ခင် လွင့်ပျောက်ခဲ့ရတဲ့ ခွပ်ဒေါင်းကြယ်ပွင့် says:
December 28, 2011 at 12:31 PM Reply
ခေါင်းစဉ်ကို click လုပ်ပြီး ကိုထွန်းအောင်ကျော် (ABSDF (မြောက်ပိုင်း) ဥက္ကဋ္ဌ) ဓါတ်ပုံကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Khin Maung Htway - ကိုထွန်းအောင်ကျော် (ABမြောက်ပိုင်း) ကချင်နယ်မြေမှာ အသတ်ခံလိုက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ဦးပါ။ လူခြင်းတော့ မရင်းနှီးပါ သူအကြောင်းတွေ ကြားဘူးရင်း နဲ့ လေးစားမိသူတစ်ဦးပေါ့
Maungmaung Skw - အိမ်မှာအမြဲလာတတ်တဲ့-အိမ်မှာဖိုးညီနဲ့အစည်းအဝေးတွေအမြဲလာလုပ်တတ်တဲ့သူ-----ဒေါက်တာသန်းအောင်နဲ့ဒေါက်တာရှီလာစန်းစန်းမြင့်တို့ရဲ့သား-ရော်နယ်အောင်နိုင် တို့အဖွဲ့ကဒေါက်တာနိုင်အောင်ရဲ့သဘောတူ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်စစ်စစ် ထွန်းအောင်ကျော် လေ--------
Maungmaung Skw - Sorry-ဒေါသတကြီးရေးလိုက်လို့ သဒ္ဒါမှားသွားတယ်-ဒေါက်တာတွေရဲ့သားလူသတ်သမား က ရော်နယ်အောင်နိုင်---
Moe Sal - ခု..သတင်းတခု..ရထားပါတယ် မခင်မင်းဇော်ဆီကပါ ခု အေဘီမြောက်ပိုင်းကို ဦးစီးပြီးပြန်ဖွင့်တဲ့ လှဆောင် ဟာ..ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့ကို သတ်ခဲ့တဲ့ ဦးစီး လူသတ်သမားအဖွဲ့ကပါ။ ဟိုတလောက မြောက်ပိုင်းမှာ ဌါနချုပ်ပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။...
ABSDF ကချင်လူသတ်ပွဲ အပေါ် ပြည်သူ့အမြင် says:
December 28, 2011 at 1:20 PM Reply
Recent comments @ Ko Maung Maung Wann's FB
ကျွန်မ.. ကို Zaw Lin Htwe ပြောတာကို လုံးဝ လက်ခံပါတယ်။ အခုချိန်မှာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ် ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်၊ ဘယ်သူတွေ တရားခံဖြစ်တယ်၊ ဘာကြောင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ပြီး တရားခံတွေကို အရေးမယူခဲ့တာလဲ စတဲ့ အဖြစ်မှန်ကို သိလိုတာပဲ ရှိတယ်။ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ၊ ပါဝင်ပတ်သက်သူ အသီးသီးရဲ့ အသံကို ကြားချင်တယ်။ အဖြစ်မှန်ကို သိပြီးရင် ဒါတွေဟာ မှားခဲ့တာကို မှားပါတယ်လို့ ၀န်ချတောင်းပန်ရမယ်။ နောက်နောင် ဘယ်သောအခါမှ ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုး မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ် ဆိုတာ အားလုံး အဖြေထုတ်ရမယ်။ အခုချိန်မှာသူတို့ညှင်းဆဲခဲ့တဲ့အတိုင်း ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူ တယောက်ယောက်ကို ပြန်ညှင်းဆဲနေရတာကို တွေ့ရင်တောင် ကျွန်မဟာ ၀မ်းသာမှာ မဟုတ်သလို လက်ခံမှာလည်း မဟုတ်ဘူး။ အာဂါတဆိုတာ ဘယ်သူ့အတွက်မှ ဘာမှ အကျိုးမရှိဘူး။ အမှုမှန်ပေါ်ပြီး အမှန်အတိုင်း ဘယ်သူဘာလဲဆိုတာ သဲသဲကွဲကွဲ သိရဖို့ကသာ အခုချိန်မှာ အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်တယ်။ <ဒါလည်းပဲ အဲဒီ Status အောက်မှာ ကျွန်မ ရေးခဲ့တဲ့ မှတ်ချက်ဖြစ်တယ်။)
December 28, 2011 at 1:21 PM Reply
Nyunt Shwe said...
ဒီကိစ္စဟာ တောင်းပန်ရုံနဲ့ ပြီးသွားရမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ တည်ဆဲဥပဒေအရ ကျကျနန စစ်ဆေးပြီး ထိုက်တန်တဲ့အပြစ် ပေးကိုပေးရမဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဘယ်လောက်ပဲသိသိ သိသူတွေက အမှန်အတိုင်းဖော်ထုတ်၊ အဲဒီ ကွင်း(ဂွင်း)ဆက်တွေကို ဆက်ယူပြီး အမှုတွဲလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
အခု အထိတော့ တာဝန်ရှိသူတွေ ဘယ်သူလဲဆိုတာ အတိအကျစာရင်းနဲ့တန်းစီထားတာ မတွေ့သေးသလိုပဲ။
သိသူတွေက အဖြစ်မှန်ကိုလဲ တင်ပြပါ၊ ဘယ်သူတွေ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာလဲ တန်းစီပြပါ။ အသတ်ခံရ အညှင်းဆဲခံရသူတွေကို ကိုအောင်မိုးဝင်း တန်းစီပြသလို တန်းစီပြပါ။
နောက်နောင်ကို ဒီလို ဆိုးရွားလှတဲ့ လူသတ်ပွဲကြီးတွေ၊ လူမဆန်တဲ့ နှိပ်စက်မှုတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုကြီးတွေ လုံးဝ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို့ အလွန် အရေးကြီးပါတယ်..
အဲဒီလို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် အကျည်းတန်လှတဲ့ အတိတ်က ဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးထဲက သင်ခန်းစာယူရပါမယ်..
ကျောင်းသားတပ်မတော် တပ်ဖွဲ့ဝင် အများစုဟာ ရိုးသားဖြူစင်ပြီး ပြည်သူ့အတွက် စွန့်လွှတ် ပေးဆပ်လိုမှု သက်သက်သာ ရှိတဲ့ အရိုးခံ ကျောင်းသားတွေပါ..
အဲဒီလို အစဉ်အလာကောင်းခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်သမိုင်းကို ညစ်နွမ်းစေခဲ့တဲ့ အောင်နိုင် (ခေါ်) ရော်နယ်အောင်နိုင် ( Ronald Aung Naing ) ၊ သံချောင်း ၊ မျိုးဝင်း ၊ လှဆောင် (ခေါ်) လှဆိုင် အပါအဝင် လူရမ်းကားတစုက ကျောင်းသားတပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း) အလံတော်အောက်မှာ မင်းမဲ့စရိုက်နဲ့ နှိပ်စက် သတ်ဖြတ်မှုတွေရဲ့ သမိုင်းမှန်ကို အမှန်အတိုင်း မှတ်တမ်းတင်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်..
ကျွန်တော် သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်ခဲ့စဉ်က - (1) says:
December 30, 2011 at 3:10 AM Reply
ကျွန်တော် သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်ခဲ့စဉ်က - (1)
ကျွန်တော် သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်ခဲ့စဉ်က - (3) says:
December 30, 2011 at 3:15 AM Reply
ကျွန်တော် သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်ခဲ့စဉ်က - (12) says:
December 30, 2011 at 3:32 AM Reply
December 30, 2011 at 9:00 AM Reply
အမှန်တရားကို ကယ်တင်ဖို့အတွက်။ ။
ငါတို့ မျက်နှာသစ်ခဲ့တယ်။ ။
ချိုမြိန်စရာလို မှီဝဲတတ်လာတယ်။ ။
တော်လှန်ပန်းတွေ ကြွေကျသွားတယ်။ ။
အချင်းချင်း သစ္စာရှိဖို့သာလိုတယ်။ ။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ကျောင်းသားတပ်မတော်)- မြောက်ပိုင်း အာဏာရူး လူတစုရဲ့လက်အောက်တွင်တော်လှန်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း အသက်ပေးသွားကြသော ရဲရဲတောက် ရဲဘော်များနဲ့ ရဲမေ မခင်ချိုဦးအား ဒီကဗျာဖြင့် ဦးညွှတ်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
(New Generations blog)
မြန်မာချင်း ရိုက်နှက်စစ်ဆေးပြီး အတင်း ဝန်ခံခိုင်းမှု (VIDEO) says:
January 3, 2012 at 2:43 AM Reply
VIDEO ကို ကြည့်ရန် ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပါ။
ဘယ်ဖက်ကမှ မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ မြန်မာတွေကရော
လူ့အခွင့်အရေးကို အကြီးအကျယ် ချိုးဖေါက်နေကြတုန်းပါပဲ။
ကိုယ့်ကို ဘာမှ ပြန်မလုပ်နိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို တဖက်သတ် ရိုက်နှိပ် စစ်ဆေးပြီး အတင်း ဝန်ခံခိုင်းနေတဲ့ အခု ဗွီဒီယို ကို ကြည့်ပြီး အဆပေါင်း ၁၀ဝ၀ နဲ့ မြှောက်ကြည့်ပါ။
အဲဒါဆိုရင် အေဘီ (မြောက်ပိုင်း) မှာ သံချောင်း၊ ရော်နယ်အောင်နိုင်၊ မျိုးဝင်း၊ လှဆောင် (လှဆိုင်) အပါအဝင် အာဏာရူး လူရမ်းကားတစုက ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်စစ်စစ် ကိုထွန်းအောင်ကျော် အပါအဝင် ကျောင်းသား ၈၀ ကျော်ကို လူမဆန်တဲ့ နှိပ်စက်မှုအမျိုးမျိုးကို လုပ်ပြီး ထောက်လှမ်းရေးပါ လို့ အတင်း ဝန်ခံခိုင်းပြီး သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့တာကို မှန်းဆကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီ ထောက်လှမ်းရေး လို့ မတရား စွပ်စွဲခံရတဲ့ ကျောင်းသား ၈၀ ကျော်ထဲက ၁၅ ယောက်ကို ၁၂-၂-၁၉၉၂ ရက်၊ ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ ရော်နယ်အောင်နိုင် တို့ အာဏာရူးအုပ်စုက ကွပ်မျက်ပစ်ခဲ့တာပါ။ တကယ်က ကျောင်းသား ၈၀ ကျော်လုံးကို သတ်ပစ်မလို့ အစီအစဉ် ရှိခဲ့တာပါ။
အဲဒီ ကွပ်မျက်ခံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသား ၁၅ ယောက်တင်မက ရန်သူ နအဖ စစ်ကြောရေးက အောချရလောက်အောင် ကမ်းကုန်တဲ့ အေဘီ (မြောက်ပိုင်း) ရဲ့ နှိပ်စက်မှုတွေကြောင့် ကျောင်းသား ၁၄ ယောက် အသက်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
မြန်မာချင်း ရိုက်နှက်စစ်ဆေးပြီး "ကုလားနဲ့ အိပ်ပါတယ်" ဆိုပြီး အတင်း ဝန်ခံခိုင်းမှု (VIDEO) says:
January 3, 2012 at 8:56 AM Reply
အဲဒီ ဗွီဒီယိုထဲက မြန်မာမိန်းကလေးတွေကို မြန်မာယောကျာ်းတွေက ဝိုင်းရိုက်တာက မလေးရှားမှာ လို့ ပြောတယ် ...
အဲဒီ မိန်းကလေးတွေက သူတို့ကို လက်ကိုင်ဖုန်းလေး ဘာလေး ဝယ်ပေးတဲ့ တခြားနိုင်ငံသားတွေ (အထူးသဖြင့် ဘင်္ဂလား မွတ်ဆလင် ကုလားတွေ) နဲ့ တည်းခိုခန်းမှာ သွားအိပ်လို့ မြန်မာတွေ ဂုဏ်သိက္ခာကျတယ် ဆိုပြီး မြန်မာ ဆိုသူတွေက နောက်မလုပ်အောင် ဆိုပြီး ဆုံးမတယ်တဲ့ဗျား ...
အဲဒီ မြန်မာမိန်းကလေးတွေကို ကြည့်ရတာ ပြည့်တန်ဆာ တွေလည်း လုံးလုံးလျားလျား ဟုတ်ပုံမရဘူး ... တခြားနိုင်ငံရောက်တော့ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ် ပျက်စီးနေတယ်လို့ ပြောရမဲ့ မိန်းကလေးတွေ ဖြစ်ပုံရတယ် ... မဟုတ်တာ လုပ်ထားပုံရတယ် ... သူတို့ကို ရိုက်ပေမဲ့လည်း တုံ့ပြန်မှုက တမျိုးဖြစ်နေတယ် ... ရိုက်တဲ့ မြန်မာယောကျာ်းတွေရဲ့ ဘေးနဲ့ အနောက်ဖက်တွေမှာ တခြားသူတွေလည်း အများကြီး ရှိတယ် ...
ဗွီဒီယို စစချင်း လူမှောင်ခိုဂိုဏ်းက ကောင်တွေက မတရား နှိပ်စက်နေတာလား ဒါမှမဟုတ် ပြည့်တန်ဆာခေါင်းက မတရား နှိပ်စက်နေတာလားလို့ ထင်ရပေမဲ့ ကြည့်ရင်းနဲ့ အဲဒီလို မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ တွေ့ရတယ် ...
နှိပ်စက်တဲ့ မြန်မာယောကျာ်းတွေက နှိပ်စက်ခံရသူ မြန်မာမိန်းကလေးတွေနဲ့ အမျိုးလည်း တော်ပုံမရဘူး ... ဒီလို နှိပ်စက်တာကို အများသိအောင် ရည်ရွယ်ပြီး အင်တာနက်ပေါ် ဖြန့်တယ် ... လုပ်ရပ်က မှားတာ မှန်တာ တပိုင်း .. ရည်ရွယ်ချက်က အဲဒီလို ဖြစ်နေတယ် ... ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဆို အဲဒီလို ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး ... ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ဖြေရှင်းကြတဲ့ ကွန်မြူနတီတခုရဲ့ လုပ်ရပ်ပဲ ...
ဘေးနဲ့ အနောက်ဖက်တွေက လူတချို့က အခု ရိုက်နေတာထက် ပိုရိုက်သင့်တယ်လို့ ပြောနေတာ တွေ့ရတယ် ... သတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိ ပြောနေတာ တွေ့ရတယ် .... မြန်မာတွေ အရှက်ရလို့ ဆိုပဲ ...
အရေးယူချင်ရင် လွယ်ပါတယ် ... အနီးစပ်ဆုံး ဖြစ်နိုင်မဲ့ သိနိုင်မဲ့ သူကနေ ဖေါ်ထုတ်လိုက်ပေ့ါ ... ဘယ်သူတွေလဲ ဆိုတော့ မသိသေးဘူး ... မလေးရှားကလို့ ပြောတယ် ...
January 3, 2012 at 11:32 AM Reply
မိုက်ရိုင်းလိုက်တာ..။ ယောက်ကျားကြီးတွေဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးကိုအုပ်စုလိုက်ဝိုင်းရိုက်ကြတယ်..။ နှမချင်းမစာနာလိုက်တာ..။ ရိုက်တာမှန်တယ်..၊ သွေးထွက်အောင်ရိုက်သင့်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေက.. ဘာတွေလဲ..။ သူ့ဟာသူ ပြည့်တန်ဆာပဲဖြစ်ပါစေ..။ လူကိုလူလိုဆက်ဆံရမယ်..။ မကောင်းမှုလို့ထင်ရင်.. ဥပဒေရှိတယ်..။ ရဲကိုတိုင်လို့တယ်..။
အုပ်ထိန်းသူကိုတိုင်လို့ရတယ်..။ ဒီလို ရမ်းကားရိုက်နှက်တာမျိုးတော့.. ရှုံ့ချတယ်..။ အဲဒီကောင်တွေကို ဖော်ထုတ်ပါ..။ အရေးယူပါ..။
January 3, 2012 at 1:58 PM Reply
ဒီလောက် မိုက်ရိုင်းတဲ့ကောင် တွေ စုံးစမ်း ဖေါ်ထုတ်ပီး အရေးယူရမယ်။ ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေက လွတ်အောင် တတ်နိုင်သူများ ကူညီကြပါ။ ဒီဖိုင်တင်ပေးသူကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၊ လူသားချင်း စာနာစိတ်ကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုပါတယ် ။ သိသမျှ ဆက်ပီးတင်ပေးကြပါ။ အမှုဆိုတာ မဆွေးပါဘူး။
အရင်တုန်းကလည်း အနှိပ်ခန်းဖွင့်ပီး မိန်းကလေးတွေကို အဓမ္မချုပ်နှောင်သူတစ်ဦး online ကနေဖေါ်ထုတ်လို့ အရေးယူခံရပီးပါပြီ . ဒီနိူင်ငံမှာ မဟုတ်လည်း တစ်နေ့ ဒီကောင်တွေ မြန်မာပြည် ပြန်လာမှာပါ .. အားလုံးသိသမျှ ဖေါ်ထုတ် မျှဝေပေးကြပါ ဒါမှ နောင်ဒါမျိုးတွေ ပပျောက်သွားမှာပါ
နှမသားချင်း မစာနာ ၊ လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ် says:
January 3, 2012 at 2:46 PM Reply
နှမသားချင်း မစာနာ ၊ လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်
"ထွန်းအောင်ကျော်ဟာ တို့လူ.... ထွန်းအောင်ကျော်ဟာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင်အစစ်" says:
မနေ့က သူငယ်ချင်း ပန်းချီထိန်လင်း က ဖုန်းဆက် ပြောလာတယ်... အရေးကြီးတဲ့ အချက်ပါ....
ကိုပေါ် ( မင်းကိုနိုင် ) ထောင်ထဲ မ၀င်ခင် .. ဒီမြောက်ပိုင်း ကိစ္စကို ရှင်းကို ရှင်းရမယ်... "ထွန်းအောင်ကျော်ဟာ တို့လူ.... ထွန်းအောင်ကျော်ဟာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင်အစစ်" ... လို့ ပြောတယ်တဲ့....
ခု ကျနော်တို့ ရဲဘော်ကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ ကိုပေါ် ( မင်းကိုနိုင် ) တို့ လွတ်လာပြီ... အေဘီ မြောက်ပိုင်း ကိစ္စကို ရှင်းမယ်..... ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ထွန်းအောင်ကျော် ဟာ သူလျှို ဟုတ်လား.. မဟုတ်လား ဆိုတာကို ကမ္ဘာကျော် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်တဲ့ ကိုပေါ် ( မင်းကိုနိုင် ) တို့က သက်သေခံလိမ့်မယ်။
လူထုက တခဲနက် ထောက်ခံနေတဲ့ ကိုပေါ် ( မင်းကိုနိုင် ) တို့က "ထွန်းအောင်ကျော်ဟာ သူလျှို မဟုတ်ပါဘူး... ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အစစ်ပါ" လို့ သက်သေခံတာကို ငြင်းပယ်ပြီး... အေဘီ မြောက်ပိုင်း မင်းမဲ့စရိုက်နဲ့ နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ပွဲ အတွက် တာဝန်ရှိသူတွေက "ထွန်းအောင်ကျော်ဟာ သူလျှိုပါ" လို့ ဆက် သတ်မှတ်ချင်သေးရင်... ကိုယ့်လူတို့... လူထုနဲ့ ဝေးရာဆီကိုသာ လျှောက်ကြပေတော့.....
January 17, 2012 at 1:47 AM Reply
ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး ကိုထွန်းအောင်ကျော် ကျောင်းသားတပ်မတော်မှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလမှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံ ၆ ပုံ ကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်စစ်စစ် ကိုထွန်းအောင်ကျော် (ABSDF မြောက်ပိုင်း ဥက္ကဋ္ဌ) ဟာ ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၂) ရက်နေ့မှာ ကချင်ပြည်နယ်၊ ပါဂျောင် ABSDF (မြောက်ပိုင်း) မှာ ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရတဲ့ အပြစ်မဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော် ရဲဘော် ၁၅ ဦးထဲက တဦး ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်နိုင် (ရော်နယ်အောင်နိုင်)၊ သံချောင်း၊ မျိုးဝင်း၊ လှဆောင် (လှဆိုင်) တို့ ABSDF (မြောက်ပိုင်း) အာဏာရူး အုပ်စုက စစ်အစိုးရက လွှတ်ထားတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးလို့ မမှန်မကန် စွပ်စွဲခံရပြီး လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်ခံရပြီးမှ ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရတာပါ။
အဲဒီလို တရားဝင် ကြေညာပြီး အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသား ၁၅ ဦး အပြင် မင်းမဲ့စရိုက်နဲ့ နှိပ်စက်ရင်း အသက်ဆုံးသွားရသူတွေ နဲ့ တရားဝင် မကြေညာဘဲ အသတ်ခံခဲ့ရသူတွေပါ ပေါင်းလိုက်ရင် အဲဒီတုန်းက ကျောင်းသား ၁၀ဝ လောက် အဖမ်းခံပြီး လူမဆန်အောင် နှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့ အထဲက ၃၀ ကျော် အသက်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
January 21, 2012 at 12:45 AM Reply
ABSDF ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်၏ မတရား ဖမ်းဆီးပြီး လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်ခြင်း ခံခဲ့ရသူ အေဘီ တောင်ပိုင်း ရဲဘော် နေ၀င်းအောင်၏ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ထုတ်ဖော်ချက် (အပိုင်း ၁) says:
January 28, 2012 at 12:50 PM Reply
( အေဘီ မြောက်ပိုင်း လုပ်ကြံမှုများ ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အေဘီ တောင်ပိုင်း အရေးအခင်း အကြောင်း )
မိုးမခ ဇန်န၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၂
(မိုးမခ၏ မိတ်ဆက်စကား -
လွန်ခဲ့သည့်လက ပူးတွဲပါစာ အစိတ်အပိုင်းတခုကို အင်တာနက်ပေါ်တွင် လက်ခံ ရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ မိတ္တူတွင် စာမျက်နှာအချို့ ပျောက်ဆုံးနေသည့်အတွက် အေဘီတောင်ပိုင်း အရေးအခင်းတွင် ကိုယ်တိုင် ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်ခံခဲ့ရသူ ကာယကံရှင်တဦးဖြစ်သည့် ကိုနေ၀င်းအောင် (လက်ရှိ ဆန်ဖရန်ဆစ်စကိုမြို့၊ ဘေးဧရိယာအနီးတွင် နေထိုင်သူ) ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာတွင် ၎င်းက သူ ၁၉၉၆ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းက ကုိုယ်တိုင် လက်ရေးဖြင့် ထိုစဉ်က အေဘီ စစ်ကော်မရှင်သို့ တင်ပြသော အစီရင်ခံစာ အပြည့်အစုံကို ပြန်လည် ရှာဖွေနေကြောင်း၊ မိတ်ဆွေရင်းများက ရှာဖွေပြီး ကွန်ပျူတာ စာစီပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့သည်။
လာမည့် ၂၀၁၂၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့သည် မြန်မာပြည်၏ ကျောင်းသားတပ်မတော် (ABSDF) ၏ မြောက်ပိုင်းနယ်မြေအတွင်း ကျောင်းသားလူငယ် အများအပြားကို စစ်ထောက်လှမ်းရေးများအဖြစ် လူတစုက မတရား စွပ်စွဲပြီး ရက်စက်စွာ လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံရသော ဖြစ်ရပ်၏ အနှစ် ၂၀ ပတ်လည်နေ့ ဖြစ်သည်။ ထိုဖြစ်ရပ်ဆိုး၏ နောက်ဆက်တွဲ ကျောင်းသားတပ်မတော် (ABSDF) ၏ တောင်ပိုင်းနယ်မြေအတွင်းတွင်လည်း ကျောင်းသားလူငယ်အချို့ကို အလားတူ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် စီရင်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကိုနေ၀င်းအောင်သည် အဆိုပါ အရေးအခင်းမှ သေကံမရောက် သက်မပျောက်ဘဲ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်လာသူ တဦးဖြစ်သည်။
ABSDF ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်၏ မတရား ဖမ်းဆီးပြီး လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်ခြင်း ခံခဲ့ရသူ အေဘီ တောင်ပိုင်း ရဲဘော် နေ၀င်းအောင်၏ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ထုတ်ဖော်ချက် (အပိုင်း ၂) says:
January 28, 2012 at 12:52 PM Reply
အထက်ပါ အရေးအခင်းများ၊ လုပ်ကြံမှုများတွင် သေကံမရောက် သက်မပျောက် ကျန်ရစ်သူများသည် မြန်မာပြည်တွင်းနှင့် မြန်မာပြည်ပတွင်ပါ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးတွင် ၎င်းတို့နှင့် အတူတကွလက်တွဲဖြတ်သန်းခဲ့ကြသူ မိတ်ဆွေရဲဘော်များ ကိုယ်တိုင်ကလည်း အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်ကြီးအကြောင်းကိုလည်း သိရှိထားခဲ့ကြပြီး ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် ကာယကံရှင်များက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်၊ မဆုိုသည်ဖြစ်စေ၊ အဆိုပါ သမိုင်းဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးကို သင်ခန်းစာယူနိုင်ရန်၊ မတရားဖမ်းဆီး လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသော အာဇာနည်ကျောင်းသားလူငယ်များ၏ သမိုင်းမော်ကွန်း အစစ်အမှန်ကို တင်ကျန်ရစ်စေရန် ၎င်းတို့၏ မိတ်ဆွေရဲဘော်များအနေနှင့် ၈၈ အရေးတော်ပုံ၏ တပ်သားများ အနေနှင့် ဖြစ်ရပ်မှန်များကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြရန် ဆက်လက် အချိန်ဆွဲနေရန် မလိုအပ်တော့ဟု မိမိတို့ ယူဆသည်။
ပူးတွဲပါ စာတွင် ဖော်ပြထားသည့် အေဘီ အတွင်းရေးမှူး ကိုမျိူးဝင်းမှာ လက်ရှိ အေဘီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ၊ အေဘီ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုနိုင်အောင်မှာ လက်ရှိ FDB (Forum for Democracy in Burma) အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် ထမ်းဆောင်နေကြသည်။
ABSDF ရဲဘော် နေ၀င်းအောင်၏ စာအပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။)
ABSDF ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်၏ မတရား ဖမ်းဆီးပြီး လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်ခြင်း ခံခဲ့ရသူ အေဘီ တောင်ပိုင်း ရဲဘော် နေ၀င်းအောင်၏ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ထုတ်ဖော်ချက် (အပိုင်း ၃) says:
January 28, 2012 at 12:53 PM Reply
အကြောင်းအရာ။ ။ စစ်ကော်မရှင်၏ အမှားများကို ၀န်ခံ ပြင်ဆင်နိုင်ရန် အသိပေးခြင်း။
အထက်ပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဖေါ်ပြပါ အချက်အလက်များကို အသိပေးသည်။
၁။ ရဲဘော်နေ၀င်းအောင် (ကပ-၂၁၇။ ၂၀၉) သည် တပ်ရင်း (၂၀၉) သံလွင်စခန်း မကဒတ တပ်ဖွဲ့ဝင် တဦး ဖြစ်သည်။
၂။ မကဒတ ဗဟို၏ တာဝန်ပေးချက်အရ NCGUB ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌါနတွင် ညွှန်ကြားရေးမှုးအဖြစ် ၁၉၉၁၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလမှ ၁၉၉၁၊ စက်တင်ဘာလ အထိ တာဝန်ထမ်းခဲ့သည်။
၃။ မကဒတ တတိယအကြိမ် ညီလာခံမှ (၁၉၉၁) မှ မကဒတ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် အညီရွေးချယ် တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော ဗဟိုဦးဆောင် ကော်မတီဝင် တဦး ဖြစ်သည်။
၄။ မကဒတ (မပ) ၏ န၀တ သူသျှို ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာအရ ကိုစိုးလင်း (မပ) ကို ဖမ်းဆီးရာတွင် ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ၏ တာဝန်ပေးမှုအရ မိမိကိုယ်တိုင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
၅။ ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ၏ တာဝန်ပေးချက်အရ ၁၉၉၁၊ အောက်တိုဘာလမှ ၁၉၉၂၊ ဧပြီလအထိ KNU တပ်မဟာ (၆) နယ်မြေရှိ မကဒတ တပ်ရင်းများ ဖွဲ့စည်းရေး စည်းရုံးရေးတာဝန် တပ်မဟာ (၄) နယ်မြေ မကဒတ တပ်ရင်းများ ဖွဲ့စည်း စည်းရုံးရေးတာဝန် မာနယ်ပလော (ထီပါဝီကြိုး) ခံစစ်တွင်း စည်းရုံးရေးတာဝန် ပြည်တွင်း U.G လုပ်ငန်းအတွက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ABSDF ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်၏ မတရား ဖမ်းဆီးပြီး လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်ခြင်း ခံခဲ့ရသူ အေဘီ တောင်ပိုင်း ရဲဘော် နေ၀င်းအောင်၏ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ထုတ်ဖော်ချက် (အပိုင်း ၄) says:
၆။ ၁၉၉၂၊ ဧပြီ (၂၀) တွင် ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေး (မာနယ်ပုလော) လုပ်နေစဉ် အစည်းအဝေးခန်းအတွင်း၌ အခြား C.E.C များ ရှေ့မှာပင် အတွင်းရေးမှုး (၂) လှဌေးက သေနတ်ထောက် ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဖြေရှင်းခွင့် မေးမြန်းခွင့် လုံးဝမပြုဘဲ ခေါင်းအ၀တ် စွပ်၍ သင်တန်းကျောင်း အချုပ် ပို့ချုပ်နှောင်ခဲ့သည်။
ရ။ ကျော်ကျော် (အပု-ကချင်) က ထိုစဉ်က မိမိ ၀တ်ဆင်ထားသော မကဒတ ကျောင်းသားတပ်မတော် လက်မောင်း ရင်ဘတ် တံဆိပ်များကို ဒါးဖြင့် ဆွဲဖြဲ ဖြတ်ထုတ်ခဲ့သည်။
၈။ လှဌေး (ကချင်မှ ကိုယ်စားလှယ်)၊ ကျော်ကျော် (အပု-ကချင်)၊ ခင်မောင်ဆွေ (မိချမ်း) တို့ ပါဝင်သော စစ်ကြောရေးအဖွဲ့ ဆိုသူတို့က မိမိကို သူသျှိုဖြစ်၍ စကရက ဖမ်းကြောင်းပြောသည်။ မိမိက မဟုတ်မှန်ကြောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် တော်လှန်ရေး အကျိုးစီးပွားမထိခိုက် စေလိုကြောင်း၊ မကဒတ တပ်ဖွဲ့ဝင် တဦးဖြစ်၍ အမှန်တရားကို လက်ခံဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
၉။ မိမိအား ညလုံးပေါက် စစ်မေး၍ နေ့ဖက်တွင်လည်း အိပ်မရအောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊ ထမင်းတနပ်နှင့် ရေ ၁ ဗူးသာ ပေးခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျအောင် ပြုမူဆက်ဆံခြင်းများ ပြုလုပ်လာခဲ့သည်။
၁၀။ ၁၉၉၂၊ ဧပြီ (၂၀) မှ မေ (၃) ရက်အထိ ကိုယ်ရေးဖြစ်စဉ်နှင့် လှုပ်ရှားမှုများ (ပြည်တွင်း၊ တော်လှန်ရေးနယ်မြေ) ကို ညစဉ် ၈ နာရီမှ မနက် ၄ နာရီကျော်အထိ စစ်မေးကြသည်။ မိမိက န၀တ သူလျှို မဟုတ်ကြောင်း၊ မကဒတ တာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ် မမှန်ခြင်း၊ မကဒတ မူဝါဒအား ချိုးဖျက်ခြင်း၊ လုပ်ဟန်မှားယွင်းခြင်း၊ ကိုယ်ကျင့်တရားဖေါက်ပြန်ခြင်း လုံးဝမရှိကြောင်းကို အခိုင်အမာ ပြောခဲ့သည်။
ABSDF ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်၏ မတရား ဖမ်းဆီးပြီး လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်ခြင်း ခံခဲ့ရသူ အေဘီ တောင်ပိုင်း ရဲဘော် နေ၀င်းအောင်၏ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ထုတ်ဖော်ချက် (အပိုင်း ၅) says:
January 28, 2012 at 12:56 PM Reply
၁၁။ သို့သော် စစ်ကြောရေး အဖွဲ့ ဆိုသူတို့က မေ (၄)ရက်နေ့မှ စကာ မိမိကို န၀တ သူလျှိုဖြစ် ကြောင်း ရိုက်နက် ညှင်းဆဲ၍ ၀န်ခံခိုင်းသည်။
(၅) အဖွဲ့အစည်း အမည်
စသော မေးခွန်း (၅) ခု ကို သာ ထပ်တလဲလဲ မေးပြီး မေလ (၅) ရက်မှ (၁၃) ရက်အထိ ညလုံးပေါက် နေ့စဉ် ရိုက်နှက် ညှင်းဆဲ ထိုးကြိတ် ကန်ကြောက် ခဲ့ကြသည်။ နေ့ဖက်တွင်မြေကျင်းထဲ၌ ချုပ်ပြီး အစာနှင့်ရေ မပေးပဲ ထားခဲ့သည်။
၁၂။ မိမိက မဟုတ်မှန် စွပ်စွဲမှုကို လုံးဝ ငြင်းဆိုပြီး မကဒတ တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦး ရထိုက်သော ဖွဲစည်းပုံပါ အကာကွယ်ကို တောင်းဆိုသဖြင့် ထုတ်တွင် ကြိုးဆွဲ၍ ရိုက်နက် ကန် ထိုးကြိတ်ကြခြင်း ပလပ်စတစ်အိပ် ခေါင်းစွပ်ကာ စစ်ခြင်း၊ သံချွန်ဖြင့် ထိုးဆွခြင်း၊ ရေလောင်း ရေနှစ်၍ စစ်ခြင်း၊ ညို့တကျည်းကို ဒုတ်ဖြင့်လှိမ့်ခြင်း စသည့် ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှု မျိုးစုံကို နေ့ရောညပါ လူမဆန်စွာ ပြုခဲ့ကြသည်။ အကြိမ်ကြိမ် သတိမေ့သွားသည် အထိ ညှင်းပမ်းခဲ့ကြသည်။
၁၃။ တဖန် လျှပ်စစ်မီးထိုး၍ စစ်ခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါအား အချိုရည်သုတ်၍ ကရင်နီ ပုရွတ်ဆိပ်များ ကိုက်ခိုင်းခြင်း၊ တောက်တဲ့အား ကိုက်ခိုင်းခြင်း၊ စအို၌ ဒုတ်ထိုး၍ စစ်ခြင်း၊ အ၀တ်အစားမဲ့ ထား၍ လိင်အင်္ဂါများကို ထိုးဆွ၍ နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းခြင်း များ ပြုခဲ့သည်။
၁၄။ အတွင်းရေးမှုး မျိုးဝင်း လာရောက် ကြည့်ရှု့ စစ်ဆေးစဉ် မိမိက မိမိသည် သူလျှို မဟုတ် မကဒတ တပ်ဖွဲ့ဝင် ရဲဘော်တဦး ဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်ကော်မရှင်အနေဖြင့် မှားယွင်းစွာ လုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ မကဒတ တပ်ဖွဲ့ဝင် တဦးအနေဖြင့် မကဒတ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီ ရသင့်သော ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု ရထိုက်ကြောင်း၊ ယခု ပြုမူပုံမှာ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လူ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေလှသည့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု သက်သက်သာ ဖြစ်ကြောင်း၊ တော်လှန်ရေး အကျိုးစီးပွားကို မထိခိုက်စေလိုကြောင်း တင်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် မျိုးဝင်းက ပို၍ ရက်စက်ရိုင်းပြစွာ နေ့ရောညပါ ရိုက်နက်ညှဉ်းဆဲမှုများ ပြုကာ မရရအောင် ၀န်ခံခိုင်းစေခဲ့သည်။
၁၅။ တဖက်မှလည်း မိမိ၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ရင်ရင်ဖူးအား ဖမ်းဆီးထားကြောင်း၊ မိမိဝန်မခံလျှင် သူမ၏ လုံခြုံရေးကို တာဝန်မယူ သူမကိုပါ ညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်မည် ဖြစ်ကြောင်း (မုဒိန်း ကျင့်မည် ဖြစ်ကြောင်း) လှဌေးနှင့် ကျော်ကျော်တို့က ပြောခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် မြောက်ပိုင်းမှ တိုက်ပိတ်၏ မိန်းမ ခင်ဆွေဦး၊ နန်းအောင်ထွေးကြည် နှင့် နို့လှန်ပြရသော ရဲမေလေး တဦး တို့၏ အဖြစ်ကို သာဓကပြကာ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီးတဦး၏ အော်ဟစ် ညည်းညူသံများဖြင့်လည်း စိတ်ဓါတ်ကျအောင် ညှဉ်းပမ်းခဲ့သည်။
ABSDF ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်၏ မတရား ဖမ်းဆီးပြီး လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်ခြင်း ခံခဲ့ရသူ အေဘီ တောင်ပိုင်း ရဲဘော် နေ၀င်းအောင်၏ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ထုတ်ဖော်ချက် (အပိုင်း ၆) says:
၁၆။ နှိပ်စက် ညှဉ်းပမ်းမှုများကို မိမိကိုယ် မိမိ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် တောင့်ခံကာ အမှန်အတိုင်း ရပ်တည်ခဲ့သော်လည်း ငှက်ဖျားနှင့် ၀မ်းကိုက်ရောဂါ ထပ်ဆင့် ဖြစ်လာပြီး လက်ခြေ လုံးဝ မလှုပ်နိုင်သည့် အခြေအနေ ဖြစ်လာရာ န၀တ သူလျှို ဖြစ်ပါသည်ဟု စစ်ကော်မရှင် (စစ်ကြောရေးအဖွဲ့) ၏ အလိုကျ ၀န်ခံခဲ့ရသည်။
၁၇။ အတွင်းရေးမှုး (၂) လှဌေး အရက်မူး၍ ရဲဘော်ငယ် တဦး ခေါ်လာကာ "တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ရိုက်ဖူးတယ် ရှိအောင် ရိုက်" ဟု ဆိုကာ ထိုးကြိတ် ရိုက်နှက်ခိုင်း၊ ဒါးဖြင့် ထိုးဆွခိုင်းခြင်း၊ မြေကြီးကျင်း တူးခိုင်းပြီး သေနတ်ဖြင့် ချော်ပစ်ခြင်း၊ မြေတွင် ကြိုးတုတ် ဒရွတ်ဆွဲ၍ ရိုက်ခြင်း များ ထပ်မံ ပြုခဲ့သည်။
၁၈။ ကျော်ကျော် (ဒု ဥက္ကဌ) ကိုအောင်ထူး၊ ဒေါက်တာမြင့်ချို၊ ကိုမောင်ဒီ၊ စိုင်းမြင့်သူ (၂၀၉)၊ ကိုမောင်မောင်ကြီး၊ ကိုမောင်မောင်တိတ်၊ မသက်သက်လွင်၊ ကိုထွန်းမြတ်သူ တို့သည် သူလျှိုများ ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိ၏ လူများ ဖြစ်ကြောင်း ရိုက်နှက် ၀န်ခံခိုင်းခဲ့သည်။ မိမိမှ "မဟုတ်" ဟု ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
၁၉။ ကိုဝင်းနိုင်ဦး၊ ကိုကိုဦး၊ ကိုနေမျိုး၊ ကိုဌေးအောင် (ကုလားလေး)၊ ကိုဌေးနိုင် (ABSDF - မိုးသီးဇွန် အဖွဲ့) တို့သည်လည်း သူလျှိုများဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိလူများ ဖြစ်ကြောင်း ရိုက်နက် ၀န်ခံ ခိုင်းခဲ့သည်။
၂၀။ မကဒတ တွင်းရှိ လုပ်သားကောလိပ် ကျောင်းသားများဖြစ်သော မောင်မောင်ကြီး၊ သက်တင်ဦး၊ လှဌေး၊ မောင်မောင်ထွန်းနှင့် သိန်းထိုက်ဦး (R.I.T)၊ ကိုအေးကို (လူ့ဘောင်သစ်) တို့သည်လည်း မိမိ၏ လူ (န၀တ သူလျှိုများ) ဖြစ်ကြောင်း ရိုက်နှက်ပြီး ၀န်ခံခိုင်းခဲ့သည်။ မိမိက မဟုတ်သည့် အတွက် ၀န်မခံဘဲ ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
ABSDF ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်၏ မတရား ဖမ်းဆီးပြီး လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်ခြင်း ခံခဲ့ရသူ အေဘီ တောင်ပိုင်း ရဲဘော် နေ၀င်းအောင်၏ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ထုတ်ဖော်ချက် (အပိုင်း ၇) says:
၂၁။ တဖန် တပ်ရင်း (၂၀၉) မှ မိမိရဲဘော်များ ဖြစ်သော ကိုအောင်နိုင်၊ ကိုတင်အောင်ဝင်း၊ ကိုမင်းသိမ်း၊ ကိုဥာဏ်ထွန်း ကိုတင်မျိုး၊ ကိုအောင်သူ တို့သည် မိမိလက်အောက်ခံ သူလျှို များဖြစ်ကြောင်း ရိုက်နက် ၍ ၀န်ခံခိုင်းသည်။
၂၂။ အထူးသဖြင့် မိမိ ကျမ်းမာရေး မကောင်းစဉ် (၀မ်းကိုက်၊ ခြေလက်သေစဉ်) စစ်မေးသော ကိုအောင်သူ၊ ကိုဌေးနိုင်တို့သည် န၀တ သူလျှိုများ ဟု ဆိုကာ အပြင်းအထန် နှိပ်စက်၍ ပြောခိုင်း ၀န်ခံခိုင်းသဖြင့် ၀န်ခံခဲ့ရသည်။
၂၃။ မိမိ၏ ၀န်ခံချက်ကို စစ်ကြောရေး အဖွဲ့၏ စိတ်တိုင်းကျ ရေးသား၍ လက်မှတ်ထိုး ၀န်ခံပေးခဲ့ ရသည်။
၂၄။ မကဒတ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် စစ်ကြောရေးအဖွဲ့ ဆိုသူတို့၏ စစ်ဆေးပုံမှာ နိမိတ်ပြ မေးခွန်းများဖြင့် လိုချင်၊ ဖြစ်စေချင်သည်ကို ရိုက်နှက် ညှဉ်းဆဲကာ ၀န်ခံခိုင်းခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ မိမိ၏ လူသား ဂုဏ်သိက္ခာ၊ လူသား အခွင့်အရေးကို ရက်စက်စွာ ချိုးဖျက်ယုံ သာမက မိမိတပ်ရင်း (၂၀၉) ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ဇနီး မိဘ၊ ဆွေမျိုး တို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ကိုပါ ထိခိုက်စေရန် ” စိတ်ဓါတ်ကို ရိုက်ချိုးပစ်ရမည်” ဟု အတွင်းရေးမှုး မျိုးဝင်း (ထားဝယ်) တွင်း (၂)၊ လှဌေး (ကချင်) တို့က ညွှန်ကြား လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
၂၅။ ပြောစေလိုသော စကားများကို ကြိုတင် သိစေ၍ ပြောခိုင်းပြီး ဗွီဒီယို ရိုက်ကူးကာ ပြစ်ဒဏ်မချ တရားမစီရင်မီကပင် ၀ါဒဖြန့် ခဲ့သည်။
ABSDF ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်၏ မတရား ဖမ်းဆီးပြီး လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်ခြင်း ခံခဲ့ရသူ အေဘီ တောင်ပိုင်း ရဲဘော် နေ၀င်းအောင်၏ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ထုတ်ဖော်ချက် (အပိုင်း ၈) says:
၂၆။ ရေးစေလိုသော အချက်အလက်များကို ရေးခိုင်းပြီး ဒေါင်းအိုးဝေ စာစောင်၌ ထည့်သွင်းကာ ပြစ်ဒဏ်မချ တရားမစီရင်မီကပင် ၀ါဒဖြန့် ခဲ့သည်။
၂၇။ မဟာမိတ်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ N.G.O များ ရှေ့တွင် ၀န်ခံရန် ခြိမ်းခြောက်ခိုင်းပြီး ဗွီဒီယို ရိုက်ယူကာ ၀ါဒဖြန့်ခဲ့သည်။
၂၈။ ဗွီဒီယိုရိုက် စာရေး ၀န်ခံ ပြောကြားခိုင်းရာတွင် စိတ်တိုင်းမကျလျှင်၊ အမူအရာပျက်လျှင်၊ စကားလုံးမှားလျှင်ပင် ထပ်မံ ရိုက်နှက်ညှဉ်းဆဲခြင်း၊ အစာနှင့် ရေဖြတ်ပြီး ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများ ပြုခဲ့ကြသည်။
၂၉။ မကဒတ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆန့်ကျင်စွာ လူ့အခွင့်အရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် အခွင့်အရေးများကို လုံးဝ လျစ်လျူရှု၍ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း အမျိုးမျိုး လူမဆန်စွာ ညှဉ်းပမ်း နှိပ်စက်ပြီး ၁ နှစ်ကျော် ချုပ်နှောင်ထားစဉ် တရားမျှတစွာ ခုခံချေပခွင့်၊ စစ်ကော်မရှင်တွင် မပါသော C.E.C/CC များနှင့် တွေ့ခွင့် လုံးဝ မပြုခဲ့ပါ။ အတွင်းရေးမှုး မျိုးဝင်းနှင့် လှဌေး က "ဒီကောင်တွေ လင်မယားက လူချစ်လူခင် များတယ်၊ ပေးတွေ့ပေးရင် ငါတို့ဖက် သေနတ်ပြောင်း လှည့်လာမယ်" ဟုပင် ထုတ်ပြောခဲ့သည်။
၃၀။ မိမိက တောင်းဆိုခဲ့သော C.E.C ဒေါက်တာမြင့်ချို၊ တပ်ရင်း (၂၀၉) ဥက္ကဌ ကိုစိုင်းမြင့်သူ၊ တပ်ရင်းမှုး ကိုသိန်းဆန်း၊ ဒုတပ်ရင်းမှုး ကိုမောင်ဦးတို့ နှင့်လည်း လုံးဝ တွေ့ခွင့် မပြုခဲ့ပဲ တောင်းဆို၍ ရိုက်နှက်မှုနှင့် ထိုသူများသည် မိမိလူများ ဟုတ်၊ မဟုတ် ဟူသည့် ညှဉ်းဆဲ နှိပ်စက် ၀န်ခံခိုင်းမှု သာ ရခဲ့သည်။
ABSDF ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်၏ မတရား ဖမ်းဆီးပြီး လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်ခြင်း ခံခဲ့ရသူ အေဘီ တောင်ပိုင်း ရဲဘော် နေ၀င်းအောင်၏ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ထုတ်ဖော်ချက် (အပိုင်း ၉) says:
January 28, 2012 at 1:00 PM Reply
၃၁။ ရုံးတင် စစ်ရာတွင်လည်း ကြိုတင် အသိပေးခြင်း လုံးဝ မရှိဘဲ ရုံးမထုတ်ခင် တရက်အလို၌ ဥက္ကဌ နိုင်အောင် (လက်ရှိ FDB အဖွဲ့၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ မိုးမခ က သည်စာကြောင်းကို ဖြည့်စွက်ထားသည်) ရောက်လာကာ "ရုံးတင်မည်၊ ပြောခိုင်းထားသည့် အတိုင်း မပြောဘဲ ရုတ်ရုတ်ရက်ရက် လုပ်လျှင် ခုံရုံး ဖျက်၍ နှိပ်စက်ကာ သတ်မည်၊ အလောင်းပင် လူစဉ်မမီ ဖြစ်စေမည်" ဟု ခြိမ်းခြောက်ပြီး နောက်နေ့ ရုံးထုတ်ခဲ့သည်။
၃၂။ မကဒတ ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေနှင့် မညီ တရားဥပဒေနှင့် မညီသော တရားစီရင်ရေး အဖွဲ့ တရားစီရင်ရေး နည်းလမ်း အချိန်တိုအတွင်း လုံးဝ ခုခံချေပခွင့်၊ အကာကွယ် ရယူခွင့် မပြုဘဲ တဖက်သတ် စစ်ဆေးကာ အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် (၁၀) နှစ် ချခဲ့သည်။
၃၃။ သို့သော် အပြစ်မချခင် ကပင် အလုပ်ကြမ်း အမျိုးမျိုး ကို ခိုင်းစေခြင်း၊ အစာ ရေ ဖြတ်ခြင်း၊ မြေတိုက်၊ ခွေးအိမ် အချုပ်များဖြင့် ကြပ်တည်းစွာ ချုပ်နှောင် ညှဉ်းပမ်း အပြစ်ပေးခြင်း များ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်နေသည်။
၃၄။ ညီလာခံများ (အရေးပေါ်ညီလာခံ၊ စတုတ္ထညီလာခံ) အကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း အယူခံခွင့်၊ ဖြေရှင်းတင်ပြခွင့်၊ ပြစ်ဒဏ်လျှော့ခြင်းများ လုံးဝ မပြုဘဲ ၃ နှစ်နှင့် ၈ လ ကျော် ချုပ်နှောင်ထားရာတွင် လူသားတယောက် သုံးပန်းတဦး အဖြစ်ပင် မဆက်ဆံဘဲ ခိုင်းစေ ညှဉ်းဆဲခြင်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာ ချိုးဖဲ့ ဖျက်ဆီးခြင်းများ ပြုခဲ့သည်။
၃၅။ ဇနီး ဒေါ်ရင်ရင်ဖူးအား အများအမြင် (တပ်တွင်းနှင့် N.G.O) ကောင်းစေရန်သာ တွေ့စေပြီး အမျိုးမျိုး ဂုဏ်သိက္ခာ ထိပါးစေရန် ထိုးနှက်ခဲ့သည်။ ပေးပို့သော အစားအစာ အသုံးအဆောင်များကိုလည်း (မဆလ) န၀တ အကျဉ်းထောင်များထက် ဆိုးဝါး ယုတ်မာစွာ ဖြတ်စားလပ်စား လုပ်ခဲ့ကြသည်။
ABSDF ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်၏ မတရား ဖမ်းဆီးပြီး လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်ခြင်း ခံခဲ့ရသူ အေဘီ တောင်ပိုင်း ရဲဘော် နေ၀င်းအောင်၏ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ထုတ်ဖော်ချက် (အပိုင်း ၁၀) says:
January 28, 2012 at 1:01 PM Reply
၃၆။ မိမိကို ၃ နှစ် ၈ လကျော် ချုပ်နှောင်ထားရာတွင် တနေရာထဲ၌ မဟုတ်ပဲ (ထိုင်း နယ်မြေ အပါအ၀င်) (၇) နေရာ၌ ပြောင်းရွှေ့ ချုပ်နှောင်ခဲ့ရာ မိမိမှ အမှန်တရားနှင့် သမိုင်းမှန်ကို ယုံကြည်၍ ထွက်ပြေးခြင်း မပြုဘဲ ရင်ဆိုင်နေခဲ့သည်။ သို့သော် ပြောင်းရွှေ့ ချုပ်နှောင်ရန်နှင့် ပြောင်းရွှေ့စဉ် ထွက်ပြေး၍ ပစ်သတ်လိုက်ရသည် ဟူသည့် စီမံဆောင်ရွက်မှုမျိုး လုပ်ဆောင်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ မကဒတ အဖွဲ့အစည်းကို ယုံကြည်သော်လည်း စစ်ကော်မရှင် အတွင်း၌ မူမမှန်မှုများ ရှိနေသည်ကို တိကျစွာ "အထောက်အထား" နှင့်တကွ သိလာခဲ့သည်။ မကဒတ တော်လှန်ရေး အကျိုးစီးပွားကို ဖျက်ဆီးနေပြီး အဆုံးသတ် ပြိုကွဲသည် အထိ (သမိုင်းနှင့်ချီ၍) လုပ်ဆောင်သွားမည့် န၀တ သူလျှို အစစ်အမှန်များ ရှိနေကြောင်း အခိုင်အမာ သိရှိသည်ကို ဖော်ထုတ်ပြနိုင်ရန် ၂၄.၁၁.၉၅ တွင် အချုပ်မှ ခိုးဖေါက် ထွက်မြောက်ခဲ့သည်။
(က) မိမိသည် စစ်မှန်သော မကဒတ တပ်ဖွဲ့ဝင် ရဲဘော်တဦး ဖြစ်သည်ဟု ယနေ့တိုင် ခံယူထားသည်။
(ခ) စစ်ကော်မရှင်သည် မကဒတ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ နှင့် ဆန့်ကျင်စွာ တော်လှန်ရေး ထိခိုက် နစ်နာစေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အမှား၊ အတွေးအခေါ်အမှား၊ လုပ်ဟန်မှားများကို ပြုခဲ့သည်။
(ဂ) စစ်ကော်မရှင်၏ မှားယွင်းမှုသည် န၀တ ၏ အလိုကျ ဖြစ်နေယုံမက သန့်စင် မွန်မြတ်သော မကဒတ ၏ သမိုင်းဂုဏ်ရောင်ကို အမဲကွက် စွန်းစေသည်။
(ဃ) စစ်ကော်မရှင်သည် လူ့အခွင့်အရေး၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို အခြေခံမှ ဖေါက်ဖျက်ကာ ညဉ်းပမ်း နှိပ်စက် သတ်ဖြတ်မှု များစွာ ပြုခဲ့သည်။
(င) မကဒတ ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းတွင် မူမမှန်မှုများ ရှိနေပြီး စစ်အုပ်စု န၀တ သူလျှို အစစ်အမှန် တို့၏ ထိုးဖေါက် ချုပ်ကိုင် လှုပ်ရှားမှုများ ဧကန် ရှိနေသည်။
(စ) မကဒတ တွင်း မမှန်မကန် မတရားမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး တော်လှန်ရေး လမ်းကြောင်းမှ သွေဖီစေရန်၊ မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီး ပြိုကွဲ အမြစ်ပြုတ်စေရန် လုပ်ဆောင်နေသူတို့ အကာကွယ်ကောင်း၊ အုပ်စုကောင်း ဖြင့် စနစ်တကျ ရှိနေသည် ကို အသိပေးပါသည်။
ABSDF ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်၏ မတရား ဖမ်းဆီးပြီး လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်ခြင်း ခံခဲ့ရသူ အေဘီ တောင်ပိုင်း ရဲဘော် နေ၀င်းအောင်၏ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ထုတ်ဖော်ချက် (အပိုင်း ၁၁) says:
January 28, 2012 at 1:03 PM Reply
မိမိ အနေဖြင့် အမှန်တရားနှင့် သမိုင်းကို လုံးဝ ယုံကြည်သည်။ မိမိတဦးတည်း အကျိုးစီးပွား ထိခိုက်ခဲ့မှု၊ ဘ၀ ကျိုးကြေခဲ့မှုကို ဖြေသိမ့်နိုင်သည်။ ဤသို့သော စစ်ကော်မရှင်၏ မှားယွင်း ကျူးလွန် ဆောင်ရွက်မှုများသည် မွန်မြတ်သော အစဉ်အလာ ရှိသည့် မကဒတ အဖွဲ့အစည်းတွင် တာဝန်မရှိဘဲ မိုက်မဲညံ့ဖျင်းစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ခေါင်းဆောင်မှု အပိုင်းနှင့် စနစ်တကျ ယုတ်မာစွာ စီစဉ် ဆောက်ရွက်ခဲ့သော ပုန်းကွယ်နေသည့် န၀တ သူလျှိုစစ်စစ်များ ၌သာ တာဝန်ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်သည်။
သို့ဖြစ်ရာ လက်ရှိ မကဒတ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ အနေဖြင့် မှားယွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများကို စုံစမ်းလေ့လာ ဖေါ်ထုတ် ၀န်ခံကာ မကဒတ တွင်း မူမမှန်မှု ရှိနေခြင်းကို ပူးပေါင်း ဖေါ်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် မကဒတ ၏ မွန်မြတ်သည့် သမိုင်းစဉ်၌ စွန်းထင်းစေသည့် အမဲကွက်များကို ဖျက်နိုင်ရန် တော်လှန်ရေးခရီး မှန်ကန်ခိုင်မာ လုံခြုံစွာ ဆက်နိုင်ရန် အသိပေးပါသည်။
– မိမိအနေဖြင့် မကဒတ ရဲဘော်တဦး အဖြစ် ခံယူ၍ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် ရှိကြောင်း။
(မိုးမခ မှ ကူးယူဖေါ်ပြသည်။)